Seychelles Inotora Mubayiro: Pamusoro Pechitsuwa Kuenda muAfrica uye Middle East
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles Inotora Mubayiro: Pamusoro Pechitsuwa Kuenda muAfrica uye Middle East
Awards • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Seychelles Kufamba + Varaidzo
Seychelles yakunda kukwikwidza zvekare sezvo payakatora kechina, iyo yakakurumbira Travel + Leisure 2021 World's Best Award senzvimbo yepamusoro yezvitsuwa muAfrica neMiddle East.
Mumwe muverengi weTravel + Leisure akataura Seychelles se "chishamiso chechisere chepasi."
Iyo yekuenda yakabuda pamusoro muchikamu chayo, ichitora 88 mapoinzi.
Seychelles inonyatso kuzivikanwa nenzvimbo dzayo dzakachengetedzwa dzakadai seVallée de Mai, imwe yezvitsuwa 115-zvitsuwa zviviri zveUNESCO World Heritage nzvimbo dzakatsaurirwa kuvanhu.
Kudzoreredza iyo Number 1 nzvimbo (iyo yaibatawo mu2019), Seychelles, inozivikanwa pristine paradhiso yakaiswa muIndian Ocean, uye "chishamiso chechisere chepasirese" semumwe muverengi weTravel + Leisure akazvizivisa, achichirumbidza "nekuda kwayo" .
Mamiriro egore rino akasvika kure kure sezvazvakamboita, magazini yacho yakati, ichizivisa mhedzisiro yeongororo iyo inobvumidza vaverengi kufungisisa nezvavanosangana nazvo pakufamba, uye kuratidza kukoshesa kutsva kwenzvimbo dzinopa runako rwusingaenzanisike uye, munzvimbo zhinji, vashoma mhomho yevanhu. Honorees yemubairo unowanzo kukurudzira vafambi sezvavanotsvaga zviitiko zvinopa mubayiro kutenderera pasirese.
Kudada zvakasvibirira zvinomera zvinomera, hupfu-chena mahombekombe, yakanaka, inoshamisa nzvimbo uye yakajeka turquoise mvura, iyo Seychelles inozivikanwawo nenzvimbo dzayo dzakachengetedzwa dzakadai seVallée de Mai, chimwe chezvitsuwa 115-zvitsuwa nzvimbo mbiri dzeUNESCO World Heritage dzakatsaurirwa kuvanhu, maruva ayo akasarudzika nemhuka nemapaki ayo emugungwa, ayo ese akafadza Kufamba & Vaverengi veLeisure.
Vachitaura nezve mubairo uyu, Mai Bernadette Willemin, Director General veKushambadzira kwe Tourism Seychelles akataura kuti kugamuchira kuzivikanwa kwakadaro kukudzwa kwekuenda.
“Kutumidzwa zita rekuti 2021 World's Best Island mu Africa uye Middle East zvakare, zvinofadza kunzvimbo yedu diki. Zvinokurudzira indasitiri iyi zvikuru kuziva kuti vashanyi vedu havangoone runako rwezvitsuwa zvedu chete asi ruzivo rwese rwunoita kuti tikosheswe uye zvechokwadi 'Rimwe Nyika.' ”
Kusarudzwa kwenzvimbo yekune dzimwe nyika kunoguma kubva kuongororo yegore rose yakaitwa neTravel + Leisure, iyo inobvumidza vaverengi veNew York-based travel magazine kuyera zviitiko zvavo zvekufamba kutenderera pasirese. Vaverengi vanoyera pamusoro mahotera epamusoro, zvitsuwa, maguta, ndege, mitsara yekufambisa, spas, uye nezvimwe, zvitsuwa zviyero pane zvinotevera hunhu: zvinokwezva zvakasikwa nemabhichi, zviitiko uye zvinoonekwa, maresitorendi uye chikafu, vanhu uye hushamwari, uye kukosha kwese. Seychelles yakasungirirwa paNr 24 neSri Lanka muzvitsuwa zvepamusoro zvemagazini mumakomborero epasirese.
Ongororo yeWorld's Best Awards yegore rino yakavhurwa yekuvhota Ndira 11 kusvika Chivabvu 10, 2021, sezvo nzvimbo dzakatenderedza pasirese dzaisimudza marambidzo eCOVID-19.
Tsvaga Inonakidza Rolli Mazuva muCultural Genoa
Kukwira Kwemukati Kwemakaroni Mutengo
Sangana naMary Rhodes, iyo itsva Tourism Gamba kubva kuGuam, USA
St. Kitts & Nevis Anoramba Kupinda Kune Vafambi kubva ...
Yakavanzika Resort Inopa madhora zviuru zviviri muCaribbean neAsia
Austria inodenha maEurofighters kuti abvise nosediving ...
Hawaii Volcano Eruption Kugadzira Anogona Varombo Mhepo ...
Gulf Dunhu Rinobuda Kufamba uye Yekutengesa Musika kuSoar ...
Hoteli dzeHawaii dzinozvisarudzira inodarika $ 1 bhiriyoni mukurasikirwa
Vaccine über alles: Zvitoro muGerman's Hesse ...
Pasi Pose LGBTQ + Yekushanya Zuva reItaly Maitiro
Europe kuenda kuAsia: Bahrain ine Gungwa-kune-Mhepo rinokurumidza ...
Mutongi weScotland anokanda chinetso chemakirabhu ehusiku ...
USA Tafura Tennis uye Blossom Hotel Houston Zvino Joinha ...
Lufthansa inobudirira kupedzisa kupedzisa kwe ...
Vanhu vekuAmerican havafungi chakaipisisa denda ...
eTurboNews anomira kumashure kweRusununguko rweKudhinda nePEN
Australia's Lockdowns Inobata Blow kune Yekunze Kufamba ...
Prototype ndege inopunzika muRussia ichiuraya vanhu vese ...
Dzinonyanya kufarirwa kosi dzegorofu / resorts muUS
Mhare yeVafambi Agent Dzidzo: Sandals Resorts ...
Kufamba-famba kuburikidza neSeychelles nhaka